VOA News, 14May 2013 —- ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ဘက်မှာ မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန် လာဖို့ ဒေသခံ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကနေ ညွှန်ကြား ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။
RFA News, 15May 2013 —- မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်း ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနနဲ့ အမေရိကန် ဝါဏိဇ္ဇအသင်းမှာ လာမယ့်တနင်္လာ(မေလ ၂ဝ ရက်)နေ့မှာ မိန့်ခွန်းစကားပြောမယ်လို့ သိရပါတယ်။
VOA News, 15May 2013 —- မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကို ချဉ်းကပ်လာတာကြောင့်၊ အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မူဆလင်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ နယူးယောက်အခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် ၏ မုန်တိုင်း ခန့် မှန်းချက် ၊ သတိပေး ချက် ၊ အကြံ ပြု ချက်
Freedom News Group, 15May 2013 —- (၁) 01B MAHASEN မဟာဆန်မုန်တိုင်းဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၂၂)ရက် နံနက် ၃း၃၀ နာရီအချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ KOLKATA မြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဖက် 443 NM (530 MILES) ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါတယ်။
မဟာစင် အရှေ့မြောက်ဖက်ကို ဆက်ရွေ့
BBC News, 15May 2013 —- မဟာစင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေလ ၁၅ ရက် မြန်မာ စံတော်ချိန် မနက် ၅နာရီခွဲ ခန့်မှန်းချက် အရ မုန်တိုင်းဟာ မေလ ၁၅ရက် မနက် ၃ နာရီခွဲ အချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ KOLKATA မြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဖက် 443 NM (530 MILES) ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
မောင်တောမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရာပြောင်း ဖို့ ငြင်းဆန်၊ မြေပုံမှာ ရခိုင်တွေ ဆန္ဒပြ
RFA News, 14May 2013 —- အန္တရာယ်ကနေ ဘေးလွတ်ရာရှောင်ရှားဖို့ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက လိုက်လံရွှေ့ပြောင်းပေးနေတာ ကို မောင်တောဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာအများစုက ငြင်းဆန် တာတွေရှိတယ်လို့ မောင်တောခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်စိုးက RFA ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။
မုန်တိုင်း အကြို ပြင်ဆင် ရေး အခက် အခဲရှိ
BBC News, 14May 2013 —- မဟာစင် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းက ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဝင်ရောက်တဲ့ အခါ ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဒေသကို အဓိက ထိခိုက် နိုင်တာမို့ အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ NGO လူမှုဝန်ထမ်း အဖွဲ့ အစည်းတွေက ကြိုတင် ကာကွယ် မှုတွေ လုပ်နေကြ ပါတယ်။
မုန်တိုင်း အကြို ပြင်ဆင် သင့်တဲ့ အချက်များ
BBC News, 14May 2013 —- မဟာစင် မုန်တိုင်းဟာ ၁၆ ရက်နေ ညနေ ပိုင်းက စပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းခြေက မောင်တော မြို့နယ် အပါအဝင် ရခိုင် ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် အထိ အရှိန် ရိုက်ခတ် သွားနိုင်ပြီး မိုးသည်းထန် နိုင် ပါတယ်။
RFA News, 14May 2013 —- မဟာဆန်မုန်တိုင်းဟာ လာမယ့် မေလ ၁၆ နဲ့ ၁၇ ရက်နေ့လောက်မှာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ဖြတ်ကျော် တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာန ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) . ၁၄ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်လာပါက ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ တလျှောက်တွင် မုန်တိုင်း ဒီရေ လှိုင်းဒဏ်များ လွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသား သဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ဦးစီးဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့က တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
VOA News, 14May 1013 —- ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်းမှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ ခရီးသည်တွေ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ လှေတစ်စင်းဟာ ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိပြီး ပင်လယ်တွင်းမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူ အရေအတွက် အတိအကျ မသိရသေးပေမဲ့ ဒီလှေပေါ်မှာ လိုက်ပါလာသူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မဟာဆန်မုန်တိုင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်တဲ့အခါ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို မိုင် ၁၂၀ လောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သဌာနကလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မုန်တိုင်းဘေးမှ လွှတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသည့် ဒုက္ခသည် စက်လှေ နစ်ရာမှ လူအနည်းဆုံး ၈၀ ခန့်ပျောက်ဆုံး
နိရဉ္စရာသတင်းဌာန. ၁၄ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် အတွင်းရှိ မူဆလင်ဒုက္ခသည်စခန်း တစ်ခုမှ မုန်တိုင်း လွှတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသော စက်လှေ တစ်စီး နစ်မြုပ်သွားရာ လူအနည်းဆုံး ၈၀ ခန့်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ပေါက်တောမှာ လှေမှောက်လို့ လူသေကြေမှုများ
BBC News, 14May 2013 —- ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်မှ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေဟာ အခုရက်တွေအတွင်း ကျရောက်နိုင်တဲ့ မဟာဆန် မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကို ရှောင်ဖို့ လှေတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းစဉ် လှေမှောက်ပြီး လူ၆၀လောက် သေနိုင်တယ်လို့ ဒေသခံ တယောက်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ အခုပြောင်းတာဟာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပြောင်းတာဖြစ်ပြီး လှေ၁၀စီးလောက် ပါဝင်တယ်လို့ ဒေသက လာတဲ့သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ မှောက်တဲ့လှေပေါ်ပါတဲ့ လူအရေအတွက် အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် လူပေါင်းတရာကျော်တယ်လို့လည်း ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။ ကမ်းကိုအသက်ရှင် လွတ်မြောက် လာသူတွေကို ရွာတွေက ကယ်ဆယ်ထားပါတယ်။ သေဆုံးသူ အရေအတွက်လည်း ဆက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဆန်မုန်တိုင်းဟာ မေလ ၁၆ရက်ညနေပိုင်းလောက် ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဝင်ရောက်တဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကြောင့် [...]
မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မည်ဟု သမ္မတ ပြော
DVB News, 14May 2013 —– မဟာစင် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မန်နေဂျာ မန်ချီနီ ကို မန်စီးတီး အသင်း ထုတ်ပယ်
BBC News, 14May 2013 — အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယား လိဂ် ရဲ့ အသင်း တခုဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်းက မန်နေဂျာ Roberto Manciniကို ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။
ငတ်မွတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စားလို့ရတဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ အရေးပါ
BBC News, 13May 2013 — ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစာရေစာ ငတ်မွတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် စားလို့ရတဲ့ အင်းဆက် ပိုးကောင်တွေ ဟာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာ တခုက ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ပရွက်ဆိတ်၊ ဓားခုတ်ကောင်နဲ့ ပိုးတောင်မာ လို စတဲ့ အင်းဆက်ပိုးကောင် တွေကို လူပေါင်း သန်း ၂ ထောင် လောက်ရဲ့ အစားအစာအဖြစ် ဖြည့်စွက် ပေးထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အစားအစာနဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုးတွေကို စီးပွားဖြစ် မွေးမြူမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် ကမ္ဘာ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေး အတွက် စိတ်ချရဖို့ကို အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အဲဒီအဖွဲ့က [...]
ကလေးဖျက်ချတဲ့ ဆရာဝန် အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ခံရ
BBC News, 14May 2013 — အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖီလာဒဲလ် ဖီးယား ပြည်နယ်က ဆရာဝန် တယောက်ဟာ ဆင်းရဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ကလေးဖျက်ချပေးပြီး အရှင် မွေးလာတဲ့ ကလေး သုံးယောက်ကို သတ်မှုနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ချက် ချခံ ခဲ့ရပါတယ်။
တရုတ် စီးပွားရေးမူဝါဒ ဆိုင်ရာ အရာရှိကို စစ်ဆေး
BBC News, 13May 2013 —- တရုတ် နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး မူဝါဒ ရေးဆွဲတဲ့ အစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးကို အဂတိ လိုက်စားမှုနဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေး နေတယ်လို့ တရုတ် အစိုးရ သတင်း မီဒီယာတွေ မှာ ထုတ်ဖေါ် ကြေညာ သွားပါတယ်။
VOA News, 13May 2013 — ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေရှိရာ အဆောက်အဦး ပြိုကျမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာတွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်သားတွေအတွက် အနိမ့်ဆုံးလစာ သတ်မှတ်ချက်ကို တိုးပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်ရွေးကောက်ပွဲ ကနဦးရလဒ် ထုတ်ပြန်
BBC News, 13May 2013 —- ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နဝက် ရှရစ်ဖ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ် ဟာ တခြား ပါတီတွေနဲ့ ညွန့်ပေါင်း လုပ်စရာ မလိုဘဲ အစိုးရဖွဲ့ နိုင်ဖို့ အခြေအနေ ပိုများ လာနေတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ကနဦး မဲရလဒ်တွေက ဖေါ်ပြနေ ပါတယ်။
VOA News, 14May 2013 —- ဆီးရီးယားအတိုက်အခံတွေကို အကူအညီတွေ ထပ်ပေးပြီး ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘက်ရှာ အယ်လ် အာဆဒ် (Bashar al-Assad) မပါတဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသစ် ထူထောင်နိုင်ရေး အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က ဆက်လက် အားပေးကူညီသွားမယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကမရွန်း (David Cameron) နဲ့ တနင်္လာနေ့က အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံမှုအပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောသွားတာပါ။ အစွန်းမရောက်တဲ့ အလယ်အလတ် ဆီးရီးယား အတိုက်အခံတွေကို အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်က ဆက်လက် ကူညီသွားမှာဖြစ်သလို လာမယ့် နိုင်ငံတကာ [...]
ဆီးရီးယားအရေး အိုဘားမားနဲ့ ကင်မရွန်ဆွေးနွေး
BBC News, 14May 2013 —- ဆီးရီးယားမှာ သမ္မတ ဘတ်ရှား အယ်လ် အာဆတ် မပါဝင်တဲ့ အနာဂတ် တည်ထောင်ပေးဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဗြိတိန် တို့ လက်ခံခဲ့ကြပြီး ဆီရီးယား သမ္မတ အာဆတ်ကို တိုးမြှင့် ဖိအားပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ — အမေရိကန် သမ္မတ၏ တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်မည်ဟု နိုင်ငံပိုင်ရုပ်/သံက မေလ ၁၃ ရက် ညတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
VOA News, 14May 2013 —- မြန်မာအစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်က ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ တရုတ်အစိုးရကို တင်ပို့ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ်အတွက် နှောင့်နှေးမှု မဖြစ်စေချင်ရင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- အိန္ဒိယနိုင်ငံ Ta Ta ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Nano ကားများကို အခွန်အခ အပြီးအစီး ကျပ် ၉၉ သိန်းဖြင့် လာမည့်ဦတင်းပတ်တွင် စတင်ရောင်းချသွားမည်ဟု ကား တင်သွင်းသည့် APEX Greatest Industrial ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ ဦးထူးအောင်လင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးသိန်းခွဲ မေ ၂၀ တွင် ထပ်မံရောင်းချမည်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အစိုးရများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် မေလအတွက် ကျပ် ၁,၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်းကတ် ၃၅၀,၀၀၀ ကို မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ချထားပေးမည်ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက ယနေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
မန္တလေး (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အားကောင်းသည့် မန္တလေးမြို့ မြို့ဟောင်းဘူတာမှ- ရန်ကုန်လမ်းပိုင်း နှင့် မြို့ဟောင်း-မြစ်ကြီးနားလမ်းမှ ကုန်ရထားအချို့ကို ကုန်တန်ဆာခနှုန်းများ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပြီးနောက် မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်းမှ ကုန်သည် အချို့က ကုန်ရထားတွဲများ ပြန်လည်အပ်နှံလိုကြောင်း ကုန်တင်အထောက်အကူပြု ကော်မတီမှတဆင့် စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပို့ကုန် သွင်းကုန် တင်ကြို အခွန်ဆောင် ရမယ်
BBC News, 13May 2013 —- မြန်မာ နိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင် တွေဟာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ရင် ကြိုတင် ပြီးတော့ ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင် ရတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
RFA News, 13May 2013 —- ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ၂ မှာရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် ဟုန်စိန် ပီနံအိတ်ခွံ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံက အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ဟာ အခြေခံလစာတွေ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက် ဒီကနေ့တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ဒေသခံ အမျိုးသမီး ၅၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြ
RFA News, 13May 2013 — လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဒီကနေ့နေ့လည်ပိုင်းက လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံ အမျိုးသမီး ၅ဝဝ ကျော်ဟာ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
RFA News, 13May 2013 —- ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းမှာ တရုတ်ရေနံပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင် ၁၀ ဦးကို ကျောက်ဖြူတရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
RFA News, 13May 2013 —- ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လက မိတ္ထီလာမြို့တွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခမှာ သံဃာတော်တစ်ပါး အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သံသယရှိသူ ၇ ဦးထဲက ၆ ဦးကို လာမယ့် မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အမိန့်ချမှတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
VOA News, 13May 2013 —– မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့က အနာဂတ်မှာ သီးခြားပြည်နယ်တစ်ခုရရှိရေး အာမခံပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ၀ပြည်နယ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူတွေကို တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ လက်နက်ကိုင်အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး ၀တပ်ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ကြား ဆွေးနွေးနေတဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော် က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
VOA News, 13May 2013 —- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တဘက်နဲ့တဘက် ယုံကြည်မှု အားနည်းနေဆဲဖြစ်ပြီး တုံ့ဆိုင်းကြန့်ကြာတာတွေ ရှိတယ်လို့ နော်ဝေ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ စစ်မှန်ပြီး လေးနက်တဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို အစိုးရဘက်က ဖော်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကိုကျော်ကျော်သိန်း က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အမေရိကန်၊ တရုတ်သံအမတ်ကြီးတွေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ
RFA News , 13May 2013 —- ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Derek Mitchell၊ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ရန်ဟိုဟန်တို့နဲ့ ဒီနေ့မှာသီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
«1234567891011121314...222» English Version